वाणिज्य बैङ्कको इक्विटीमा प्रतिफल घट्यो | गृहपृष्ठ
Home लगानी वाणिज्य बैङ्कको इक्विटीमा प्रतिफल घट्यो
on: ६ भाद्र २०७५, बुधबार ०९:०९ लगानी
वाणिज्य बैङ्कको इक्विटीमा प्रतिफल घट्यो
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को चौथो त्रैमासमा इक्विटीमा प्रतिफल (आरओई) औसतमा १४ दशमलव २७ प्रतिशत रहेको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा ३१ दशमलव २५ प्रतिशत विन्दु कम हो । चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका १४ बैङ्कको आरओई औसतभन्दा बढी छ भने १२ ओटा बैङ्कको औसतभन्दा कम छ । एनआईसी एशिया बैङ्कले भने आरओई प्रकाशित गरेको छैन ।
सो अवधिमा यी २८ बैङ्कको चुक्तापूँजी समग्रमा २३ दशमलव ६६ प्रतिशत र जगेडा कोष ७१ दशमलव ३४ प्रतिशतले बढेको छ । चुक्तापूँजीको अनुपातमा बैङ्कहरूले खुद नाफा बढाउन सफल नभएपछि इक्विटीमा प्रतिफल घटेको हो । सो अवधिमा यी कम्पनीको खुद मुनाफा १९ दशमलव २९ प्रतिशत बढेको छ । समग्रमा यी बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी २२ दशमलव ८७ प्रतिशतले बढेको छ भने सञ्चालन मुनाफा २६ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतले बढेको छ ।
नेपाल बैङ्कको आरओई सबैभन्दा बढी अर्थात् २५ दशमलव ८६ रहेको छ भने सबैभन्दा न्यून सिभिल बैङ्कको ८ दशलमव १६ रहेको छ । अघिल्लो आवको चौथो त्रैमासमा रू. ३ अर्ब ११ करोड खुद नाफा आर्जन गरेको नेपाल बैङ्कले गत आवको सोही अवधिमा रू. ३ अर्ब ३९ करोड नाफा कमाएको छ । यो गत आवको तुलनामा ९ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत बढी हो । यस बैङ्कको चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब ४ करोड रहेको छ । जगेडा कोष भने करीब ७ गुणाले बढेर रू. २४ अर्ब ७ करोड पुगेको छ । चुक्तापूँजीको तुलनामा खुद नाफा बढाउन नसक्दा यस बैङ्कको आरओई गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा घटेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस बैङ्कको आरओई ३४ दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको थियो । सो अवधिमा बैङ्कको सञ्चालन मुनाफा ४२ दशमलव २३ प्रतिशत र खुद ब्याज आम्दानी ९ दशमलव ७९ प्रतिशत बढेको छ ।
गत आवमा जनता बैङ्कको चुक्तापूँजी करीब रू. ८ अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा यो पूँजी ५४ दशमलव ३५ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आवको चौथो त्रैमासमा रू. १ अर्ब ४९ करोड रहेको यस बैङ्कको जगेडा कोष गत आवको सोही अवधिमा बढेर रू. २ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । बैङ्कको खुद नाफा ८५ प्रतिशतले बढेको छ । यस बैङ्कको नाफामा वृद्धि हुनुका साथै आरओई पनि बढेको छ । अघिल्लो आवमा यस बैङ्कको आरओई ५ दशमलव २३ प्रतिशत रहेको थियो ।
आरओई गणना गर्ने प्रक्रिया
आरओई ≠ खुद नाफा/कुल शेयरधनी इक्विटी×१००